Nhau - Iyo Yakakodzera Kuisirwa Nzira yeEmergency Mwenje
Iyo Yakakodzera Kuisirwa Nzira yeEmergency Mwenje
Kuchengetedza kwekumisikidza mwenje yekukurumidzira
1. Kutanga, sarudza panowanikwa bhokisi remagetsi nemarambi, wobva waisa nenzira kwayo, uye gadzira tambo-mbiri uye shanu-musimboti tambo dzehurefu hwakaenzana.
2. Shandisa wrench yakakwiririsa kuvhura iro bhokisi remagetsi bhokisi reiyi tambo inlet uye bvisa iyo ballast. Unganidza mugumo mumwe wakagadzirirwa matatu-musimboti tambo kubva pakuburitswa kwesimba rebhokisi kuenda ku ballast zvinoenderana nezvinodiwa zvekuputika-chiratidzo, wobva wabatanidza kumucheto kwetambo-shanu tambo kubva pane kuiswa kwesimba bhokisi kune iyo ballast. , wobva wabatanidza bhatiri Isa iyo inoenderana yakanaka uye isina kunaka wiring nzvimbo dzebhatiri pane redunhu bhodhi, *** vhara iro simba bhokisi revhavha kuti rigadzirise.
3. Mushure mekugadzirisa rambi uye bhokisi remagetsi zvinoenderana nechimiro chakatemerwa, shandisa chipanera cheheksagoni kuvhura sikuruvha pabutiro repamberi rerambi. Mushure mekuvhura chifukidziro chepamberi, batanidza kumwe kwekupedzisira kwetatu-musimboti tambo kune mwenje zvinoenderana nekuputika-chiratidzo cheyakajairika, wozogadzirisa chifukidziro chepamberi mushure mekunge chakabatana, wozobatanidza mumwe mugumo wetambo shanu-yepakati kuguta simba maererano neyakajairika-chiratidzo cheyakajairwa. Ipapo mwenje unogona kuwanikwa.
4. Dzorera emergency emergency switch switch pane iyo ballast kune iyo OFF chinzvimbo, uye yekunze wiring kudzora emergency basa remwenje ichaitwa. Kana iwe usiri kuda kushandisa waya kudzora emergency, wobva wadhonza switch kune iyo ON chinzvimbo, uye inozongoitwa yega kana simba ragurwa. Vhura iyo emergency emergency.
5. Mwenje wechimbichimbi unoda kutariswa panguva yekushandisa. Kana mwenje wadzikira kana mwenje we fluorescent unonetsa kutanga, unofanirwa kubhadhariswa ipapo ipapo. Nguva yekuchaja ingangoita maawa gumi nemana. Kana ikasashandiswa kwenguva yakareba, inoda kubhadhariswa kamwe chete pamwedzi mitatu, uye nguva yekuchaja ingangoita maawa masere. Mutengo wemwenje wekukurumidzira
Mwenje yechimbichimbi yakawanda sei? Kunyanya zvinoenderana nerudzi rwayo, modhi uye mamwe misiyano. Mutengo wemagetsi enguva dzose ekukurumidzira unowanzo kuve wakakombama makumi mashanu nemashanu, mutengo wemwenje dzekukurumidzira nemitemo yenyika inowanzo kuve makumi masere neshanu yuan, uye mutengo wemarambi ekukurumidzira ane dhayamita mazana maviri nemazana mashanu anowanzo kuve makumi masere nemasere. Mutengo wemagetsi emagetsi ekukurumidzira unenge wakachipa, sekureba seyuan shoma kana gumi yuan. Nekudaro, iwo mutengo wemarangi echimbichimbi emagetsi, akadai sePanasonic mwenje yekukurumidzira, kazhinji anotangira kubva pa150 kusvika ku200 yuan.
Unyanzvi hwekutenga hwechiedza chekukurumidza
1. Sarudza iyo ine yakareba mwenje nguva
Semidziyo yekukurumidzira moto, iro basa hombe remwenje yekukurumidzira kupa mwenje yenzvimbo yenjodzi kwenguva yakareba kudzidzisa vashandi vekudzimisa moto kutarisana nenjodzi iyi. Naizvozvo, patinotenga mwenje yekukurumidzira, tinofanirwa kusarudza yakareba mwenje nguva. Tinogona kufunga nezve bhatiri nemarambi echiedza che emergency.
2. Sarudza zvinoenderana nenzvimbo yaunogara
Kana isu tichisarudza mwenje yekukurumidzira, isu tinosarudzawo zvichienderana nenzvimbo yedu. Kana iri nzvimbo ine njodzi huru, zvirinani kusarudza mwenje wechimbichimbi nebasa rekuputika. Kana iri munzvimbo ***, saka zviri nani kusarudza embed emergency emergency, iyo isingakanganise kutaridzika uye zvakare ine yakanaka mwenje mhedzisiro.
3. Sarudza yakanaka mushure mekutengesa sevhisi
Mwenje yemagetsi ndeyemhando yepamusoro-yekushandisa zvigadzirwa zvemagetsi. Tichazosangana nematambudziko akasiyana siyana panguva yekushandiswa. Naizvozvo, kana isu tikatenga mwenje yekukurumidzira, tinofanirwa kusarudza avo vane yakanaka mushure mekutengesa sevhisi uye yakareba waranti nguva. Nenzira chete iyi ndipo patinogona kuve takasununguka.
Kupatsanura kwemagetsi ekukurumidza
1. Moto mwenje mwenje
Mwenje yemoto mwenje inofanirwa muzvivakwa zvese zveveruzhinji. Inonyanya kushandiswa kudzivirira kubuda kwemagetsi kamwe kamwe kana moto kubva pakuitika sechiratidziro chiratidzo chekubuda kwevanhu. Inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzekutengesa, zvivakwa zvehofisi, mahotera, nezvimwewo, Zvipatara, zvivakwa zvepasi, nezvimwe.
Ehezve, pane chaiko mhando zhinji dzemoto mwenje mwenje.
a. Kune matatu marudzi emarambi munzvimbo dzakasiyana dzekushanda. Imwe ndiyo mwenje unoenderera mberi wechimbichimbi unogona kupa mwenje unopfuurira. Iyo haifanire kutariswa seyakajairwa mwenje, uye imwe yacho isiri-inoenderera emergency emergency mwenje inoshandiswa kana yakajairwa mwenje mwenje ikakundikana kana iri kunze kwesimba. , Rudzi rwechitatu mubatanidzwa wechimbichimbi mwenje. Anopfuura maviri mwenje masosi akaiswa mune iyi mhando yechiedza. Anenge mumwe wavo anogona kupa mwenje kana yakajairika magetsi magetsi ikakundikana.
b. Kune zvakare maviri marudzi emarambi ane akasiyana mabasa. Imwe ndeye kupa marambi emwenje anodikanwa kumigwagwa, nzira dzekubuda, masitepisi uye nzvimbo dzinogona kuve nenjodzi kana paitika tsaona. Imwe ndeye kuratidza zvakajeka mafambiro ekubuda uye ndima. Logo mhando marambi ane zvinyorwa uye mifananidzo.
Rudzi rwemasaini marambi akajairika mwenje mwenje mwenje. Iyo ine zvakajairika zvinodiwa. Chiratidzo chayo kupenya kwepamusoro ndi7～10cd / m2, kukora kwemavara ezvinyorwa zvacho ingangoita 19mm, uye kukwirira kwayo kunofanirawo kunge kuri 150mm, uye kureba kwekutarisa Kunongova 30m, uye zvinonyanya kujeka kana kupenya kwemavara kuchinge kwakakura kusiyanisa neshure.
Moto mwenje mwenje inoumbwa neyechiedza sosi, bhatiri, mwenje muviri uye zvemagetsi zvikamu. Emergency mwenje uchishandisa fluorescent mwenje uye imwe gasi inobuditsa mwenje sosi zvakare inosanganisira inoshandura uye chayo ballast chishandiso.
2. Emergency mwenje
Rudzi rwechipiri rwemwenje yekukurumidzira runonyanya kushandiswa kumwenje kwekukurumidzira mumatura, migero, migwagwa nedzimwe nguva. Iine hunhu hwekushanda kwakanyanya uye kuchengetedza simba. Inonyanya kushandisa yechina chizvarwa chegirini chengetedzo yezvakatipoteredza, yakakwira-simba chena LED yakasimba-mamiriro mwenje sosi. Iyi sosi yechiedza ine hunyanzvi hwakajeka hwekuita, uye hupenyu hwayo hwebasa hwakareba. Hazvidi kuchengetedzwa kwenguva yakareba.
Iyo zvakare mushandisi-inoshamwaridzika dhizaini chigadzirwa, iyo inogona otomatiki uye nemaoko switch mabasa ekukurumidzira. Iyo yakafara voltage dhizaini iri nyore kushandisa, ine yakapfava mwenje, isina kupenya, uye isina kupenya, iyo inogona kubvumidza vanoshanda kuvandudza kugona kwebasa. Iyo isingaremi alloy zvinhu zvegobvu inopfeka isingagadzirike, isina kupisa ngura, isina mvura uye guruva-humbowo.
Kuiswa kukwirira kwechiedza chekukurumidzira
Ini ndinotenda kuti pakutenga, iwe uchaona kuti kunyangwe mangani emhando yepamusoro uye ane fashoni migwagwa, pane mwenje wechimbichimbi pamadziro. Muchokwadi, izvi zvakaiswa zvinoenderana nemirau yemusuwo wemoto. Kunyangwe ichitaridzika kunge isingafadzi, yakachengeteka. Panguva imwecheteyo, yerudzi urwu rwechiedza chekukurumidzira, kwete chete hunhu hunofanira kusangana neyakajairwa, asiwo chiyero chekuongorora chebazi rakakodzera.
Muzviitiko zvakawanda, kukwirira kwekumisikidza kwerudzi urwu rambi kuri 2.3m. Muchokwadi, izvi zvine hwaro hwakati. Kufanana nekugara kwedu kwese, kukwirira kwega yega gorosi kungangoita 2.8m, uye kukwirira kwenzvimbo dzekutengesa kunenge kwakakwirira. Naizvozvo, kuisa mwenje wechimbichimbi pakukwirira kwakadaro kwakaringana kuita mhedzisiro yemwenje, uye zvakare zvakarerukirwa kugadzirisa.
Kune dzimwe nzvimbo dzakasarudzika, chigadzirwa chekumisikidza kukwirira zvakare kune zvimwe zvinodiwa, senge masitepisi kana makona. Idzi nzvimbo dzine njodzi dzinowanzo kumanikidza nekuputika dzinogona kukonzera tsaona dzakakomba nekuti havaone zvakajeka panguva yekutiza nechimbichimbi. Naizvozvo, mwenje yekukurumidzira inofanira kuiswa padhuze nepasi munzvimbo idzi, uye kukwirira hakufanirwe kudarika mita imwe chete.
Kuisirwa yakatarwa yekukurumidzira mwenje
Kazhinji kutaura, urwu rudzi rwemwenje ruchaiswa pamusuwo wefodhi yekubuda kwekuchengetedza, ingangoita 2m pamusoro pevhu. Ehe, kune mamwe misika mikuru yemagetsi, nzvimbo dzekutengesera nedzimwe nzvimbo, mwenje miviri-yemwenje yekukurumidzira ichave yakanangana nemadziro-akaiswa pambiru.
Muhupenyu hwezuva nezuva, zvakajairika kuti mwenje haugone kushandiswa zvakajairika nekuda kwenzira isiriyo yekubatanidza. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kuti mwenje woga woga wechimbichimbi ugadzirirwe nemutsara wakatsaurirwa, pasina switch pakati. Iwo maviri-waya uye matatu-waya mwenje mwenje mwenje inogona kuve yakabatana pane yakatsaurwa magetsi magetsi. Kuiswa kwesimba rega rega rekuzvipira kunofanirwa kusanganiswa nemitemo inoenderana yekudzivirira moto.
Kana paitika moto, sezvo paine hutsi hushoma padhuze nepasi, hunhu hwevanhu kukotama kana kukambaira kumberi panguva yekubuda. Nekudaro, yemuno yakakwira-yekuvhenekera mwenje inoshanda zvakanyanya kupfuura iyo yunifomu mwenje inounzwa neepamusoro-soro kumisikidzwa, saka yakaderera-danho kumisikidzwa kunokurudzirwa. Ndokunge, ipa mwenje mwenje wekubuda padhuze nepasi kana padanho repasi.